modular ဗီရို၏အားသာချက်များနှင့်တပ်ဆင်ခြင်းအဆင့်များ - သတင်းများ - J&S Household Products Co. , Limited ။
modular ပရိဘောဂများသည်အိမ်ပုံစံတစ်မျိုးလုံးကိုပိုမိုပေါင်းစည်းစေပြီးဘ ၀ ကိုပိုမိုသက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေသောကြောင့်၎င်းသည်ဖက်ရှင်နှင့်ခေတ်ရေစီးကြောင်းစသည်တို့ကိုပေါင်းစပ်ထားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် multi-function သာမကဘဲအလွန်ဝတ္ထုများနှင့်လည်းပတ် ၀ န်းကျင်နှင့်သဟဇာတဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့် modular ဗီရို၊ ၎င်းကိုပထမဆုံး ၀ ယ်ရန်အလွန်အဆင်ပြေသည်၊ အွန်လိုင်းတွင်မှာယူမှုကိုတိုက်ရိုက်ပြုလုပ်ရန်ကောင်းသည်။ ၎င်းနောက်သင်၏ကိုယ်ပိုင်လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီသင်ပေါင်းနိုင်သည်။ သင်ပုံးထပ်လိုချင်လျှင်၊ ပုံးထပ်ထပ်ထည့်နိုင်သည်။ ဒါဟာစွယ်စုံဖြစ်ပြီးသေးငယ်တဲ့ခြေရာရှိပါတယ်။ အကယ်၍ သင်နောက်သို့ရွေ့လျှင်၊ ၎င်းသည်ဖျက်ရန်အလွန်အဆင်ပြေပါသည်။
1, ပထမ ဦး ဆုံးအခြေစိုက်စခန်းပန်းကန်ထည့်သွင်းပါ
သင်ဘာပဲလုပ်လုပ်အခြေခံအုတ်မြစ်ချဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတာသိထားတယ်၊ ဒါကြောင့် modular wardrobe ကို install လုပ်တာကအတူတူပဲ။ ဗီရို၏အောက်ခြေကိုစနစ်တကျမတပ်ဆင်ပါကဗီရိုတစ်ခုလုံး၏တည်ဆောက်ပုံသည်အလွန်မတည်မငြိမ်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ၎င်းသည်အနာဂတ်အသုံးပြုမှုကိုထိခိုက်ရန်လွယ်ကူသောကြောင့်အောက်ခြေပြားကိုတပ်ဆင်သောအခါအမျိုးမျိုးသော interfaces များကိုတတ်နိုင်သမျှတပ်ဆင်သင့်သည်။ တပ်ဆင်မှုပြီးစီးသွားပါကလက်ဖြင့်ညင်ညင်သာသာနှိပ်လိုက်ပါ။ installation ကိုလှုပ်ခြင်းမရှိဘဲပြုမိသည်။
2, နောက်ကျောပန်းကန် Install လုပ်ပါ
နောက်ကျော panel ကိုတပ်ဆင်သောအခါ modular ဗီရိုအထူးသဖြင့်အရေးကြီးသောဖြစ်သင့်သည်, နောက်ကျော panel ကိုနှင့်အောက်ခြေပန်းကန်များအကြားထောင့် 90 ဒီဂရီ၏ညာဘက်ထောင့်မှာထားရှိမည်။ ခန့်မှန်းရန်နည်းလမ်းမရှိလျှင်တိုင်းတာရန်တိုင်းတာသည့်ကိရိယာကိုသင်အသုံးပြုနိုင်သည်။
3. ဘေးထွက်ပန်းကန်ကို Install လုပ်ပါ
ဘေးပတ်ပြား၏နှစ်ဖက်စလုံးကိုအောက်ခြေနှင့်နောက်ကျောပြားများနှင့်ချိတ်ဆက်ထားရမည်ကိုလူတိုင်းသိသည်။ ပန်းကန်သုံးခုသည်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုအကြား ၉၀ ဒီဂရီတိုက်ရိုက်အကွာအဝေးရှိရမည်။ ထို့ကြောင့် အကယ်၍ ယခင်တပ်ဆင်မှုသည်တိမ်းစောင်းလျှင်၎င်းသည်အဆင့်ဆင့်မှားယွင်းသွားလိမ့်မည်။
4. ထိပ်ပန်းကန် Install လုပ်ပါ
နာမတော်ကိုအမှီပြု။ အကြံပြုအဖြစ်, ထိပ်ပန်းကန်ဗီရို၏ထိပ်ဖြစ်ပါတယ်။ တပ်ဆင်သည့်အခါအင်တာနက်နှစ်ခု၏တည်ငြိမ်မှုနှင့်ခိုင်မြဲမှုကိုအထူးဂရုပြုပါ။ တပ်ဆင်ပြီးနောက်ဗီရိုတစ်ခုလုံးတစ်ခုလုံးပြီးစီးသွားသည်။
မော်ဂျူးဗီရို၏ဘောင်အားလုံးတပ်ဆင်ပြီးပါကအံဆွဲများ၊ စင်များ၊ တံခါးများနှင့်အခြားအစိတ်အပိုင်းများကို၎င်းတို့နေရာများသို့ပြန်ပို့နိုင်သည်။ ၎င်းတို့အားလုံးတပ်ဆင်ပြီးပါကဖက်ရှင်ဗီရိုတစ်ခုပေါ်လာမည်။
အထက်တွင်ဖော်ပြထားသော modular ဗီရို၏အားသာချက်များနှင့်တပ်ဆင်ခြင်းအဆင့်များမိတ်ဆက်ခြင်းဖြစ်သည်။ လူတိုင်းအတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေမည့် modular ဗီရို၏အားသာချက်များနှင့်တပ်ဆင်ခြင်းအဆင့်များကိုလူတိုင်းနားလည်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်မျှော်လင့်ပါသည်။